Sorona Masina ny 06/05/2018 - Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 06/05/2018
ALAHADY FAHA-6 – Taona B fankalazana ny Paka
TSY MIFIDY OLON-KOTIAVANA ANDRIAMANITRA
Asa. 10, 25-26. 34-35. 44-48
Nidina tamin’ny Jentily koa ny fanomezan’ny Fanahy Masina.
Tamin’izany andro izany, raha vao niditra tao Sezarea i Piera, dia notsenain’i Kôrnely, kapiteny rômanina, ka sady niankohoka teo an-tongony izy no nitsaoka azy. Fa nasain’i Piera nitsangana izy, nataony hoe: “Mitsangàna, fa olona ihany aho”. Dia niloa-bava i Piera ka nanao hoe: “Hitako marina tokoa fa tsy mizaha tavan’olona Andriamanitra: fa izay matahotra Azy sy manao ny marina, dia ankasitrahiny, na aiza na aiza firenena misy azy”. Mbola miteny eo i Piera no nidina tamin’izay rehetra nihaino ny teniny ny Fanahy Masina ka talanjona fatratra ny mpino voafora, tonga teo niaraka tamin’i Piera, nahita fa nidina tamin’ny Jentily koa ny fanomezan’ny Fanahy Masina, satria reny niteny fiteny samihafa sy nankalaza an’Andriamanitra izy ireo. Dia hoy i Piera: “Azo lavina tsy hatao Batemy amin’ny rano va ireto olona efa nandray ny Fanahy Masina toa antsika ireto?” Koa ireo, nasainy natao Batemy amin’ny Anaran’i Jesoa Kristy Tompo; izy kosa nangatahin’ireo hitoetra eo aminy andro vitsivitsy.
Fiv.: Nanambara ny famonjeny tamin’ireo firenena ny Tompo.
Nahariharin’ny Tompo ny famonjeny, ny fahamarinany hitan’ireo firenena. Tsarovy, ry terak’i Israely, ny fitiavany sy fahamarinany!
1 Jo. 4, 7-10
Andriamanitra dia fitiavana.
Ry hava-malala, aoka hifankatia isika, fa ny fitiavana dia avy amin’Andriamanitra, sy mahalala an’Andriamanitra. Izay tsy tia dia tsy mahalala an’Andriamanitra, satria Andriamanitra dia fitiavana. Ary nampiseho ny fitiavany antsika Izy, tamin’ny nanirahany ny Zanany Lahy tokana ho amin’izao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin’ny alalany. Ary toy izao izany fitiavana izany: tsy isika no tia an’Andriamanitra rahateo, fa Izy no tia antsika mialoha, sy naniraka ny Zanany ho sorom-panavotana antsika amin’ny fahotantsika.
Raha misy tia Ahy ka mitandrina ny teniko, hoy ny Tompo, dia ho tian’ny Raiko izy, ka hankao aminy Izahay ary honina no aminy.
Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafoy ny ainy ho an’ny sakaizany.
Tamin’izany andro izany, i Jesoa niteny tamin’ny mpianany nanao hoe: “Tahaka ny nitiavan’ny Ray Ahy no nitiavako anareo koa, koa mitomoera amin’ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo no hitoetra amin’ny fitiavako, tahaka ny nitandremako ny didin’ny Raiko sy itoerako amin’ny fitiavany. Izaho no milaza izany aminareo, dia mba ho ao aminareo ny fifaliako, ary mba ho lavorary ny fifalianareo. Izao no didiko, dia ny mba hifankatiavanareo tahaka ny nitiavako anareo. Tsy misy manam-pitiavana lehibe kokoa noho ny mahafoy ny ainy ho an’ny sakaizany. Ianareo no sakaizako, raha manatanteraka izay andidiako anareo. Tsy ataoko hoe mpanompo intsony ianareo, satria ny mpanompo tsy mahalala izay ataon’ny tompony; fa efa nataoko hoe sakaiza ianareo, satria efa nambarako taminareo avokoa izay rehetra reko tamin’ny Raiko. Tsy ianareo no nifidy Ahy, fa Izaho no nifidy anareo, ka nanendry anareo mba handehananareo sy hahavokaranareo, ary haharetan’ny vokatrareo, sy hanomezan’ny Raiko anareo izay rehetra hangatahinareo amin’ny Anarako. Ny andidiako anareo dia ny mba hifankatiavanareo”.
Ry kristianina havana, raha tia hoatra an’Andriamanitra ny olombelona rehetra dia hiadana sy hifanampy ary hifankahazo toy ny mpiray tampo; koa mivavaha mba holavorarîn’Andriamanitra ny fikezahantsika hifankatia.
* Nirahin’Andriamanitra hitory ny finoana tamin’ireo tsy Jody i Piera; koa mivavaha mba handroso hatrany ny asa fampielezana ny Finoana ataon’ny Eglizy, ka ho afa-manatona sy mankalaza an’Andriamanitra, ny mahitsy fo rehetra eran-tany.
* Maro ny mpanao pôlitika sy ny mpanasoa vahoaka manomana rafi-piainana hahafahana mifankatia marina tokoa; koa mivavaha mba hanampy azy ny kristianina, ary hino izy ireny fa manampy ho tody amin’izany, ny fandrosoan’ny Fanjakan’Andriamanitra.
* Mivavaha mba tsy ho voaefitrefitry ny harena sy ny saranga tsy mitovy, ary ny antoko samy hafa ny olombelona eran-tany, fa hiray hina sy hifankatia toy ny mpiray tam-po, hanjakan’ny fiadanana araka ny hevitr’Andriamanitra.
* Misy tany sy firenena mbola tsy nandre ny Evanjely; koa mivavaha mba hanirahan’Andriamanitra mpiasa vonona ary tsy mahalala sasatra, hampahafantatra an’i Kristy any aminy.
* Ny tia sahala amin’i Jesoa dia mahafoy hatramin’ny aina; koa mivavaha mba hanana izany herim-po izany isika, sy hampiseho azy eo amin’ny fiainantsika isan’andro.
Tompo ô, ataovy mitovy fitiavana amin’ny Fonao ny fonay; ataovy mitovy hery amin’ny Fitiavanao ny fitiavanay, dia hahay hahafoy tena tokoa izahay ka hampanjaka ny fitiavana eran-tany.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0134 s.] - Aidé par Evanjelyanio.org